Sonke siye sazwa ngokufuduka kwemisebenzi, lapho abantu abavela emazweni ampofu bexoshwa ezweni elithuthukile ngenhloso yokuthola imali. Inqubo enjalo kumhlaba wonke yayibizwa ngokuthi "ukufuduka kwemisebenzi emhlabeni jikelele". Njengoba le nqubo ibilokhu iqhubeka iminyaka engaphezu kwekhulu, izakhamuzi eziningi, uma zibala izinkomba ezithile ze-GDP zezwe elithile, zicabange ngokucophelela izinqolobane zabasebenzi bezizakhamuzi ezingezona izakhamuzi.
Ngokuvamile, izinsiza zomsebenzi ziyisici esibaluleke kakhulu ekukhiqizeni, okubhekwa ukuhamba okuphezulu nokuguquguquka okukhulu. Iqiniso liwukuthi abantu bebelokhu befuna ukuthola izindawo lapho kuzohlala khona ukunethezeka, futhi inkokhelo yomsebenzi oyenziwe ifaneleka kakhulu. Yingakho ukufuduka kwemisebenzi emhlabeni jikelele kwenzeka ikakhulu emazweni athuthukile. Izinga eliphakeme lokuphila kanye neholo (uma kuqhathaniswa namanye amazwe) linikeza lezi zinsuku ngomthelela oqinile wezandla ezintsha.
Kumele kuqashelwe ukuthi ezimweni eziningi, abafuduki abasemaphandleni angaphandle, basebenza ezimbonini ezikhokha kancane, kanye nasezimbonini zokwakha nezesevisi. Lokhu kungenxa yokuthi izakhamuzi zombuso othuthukile iningi lithola imfundo ephakeme futhi zama ukuthola umsebenzi ezikhundleni eziphezulu ezinkampanini ezinkulu namafemu. Ngakho-ke, ukungabikho kwezandla zabasebenzi kugcinwa kuphela emsebenzini ongcolile nowingozi, lapho abafuduki beza khona ikakhulukazi.
Ukufuduka kwemisebenzi yomhlaba wonke kudlala indima ebalulekile ekuqinisekiseni inqubo yokukhiqiza jikelele yanoma yiliphi izwe, ngakho lizohlale likhona. Isisekelo sethu sezomthetho sivumela izakhamuzi zaseRussia ukuba zihambe ezweni ukuze zithole imali phesheya, futhi konke lokhu kungahle kwenziwe ngokomthetho. Kodwa-ke, abaningi bethu bakithi bayashiya ukufuna injabulo emazweni angaphandle futhi ngokungafaneleki, ngakho-ke namuhla akunakwenzeka ukubiza inani eliqondile lamaRussia asebenza kwamanye amazwe. Ngokusho kwedatha engavumelekile namuhla izigidi ezingu-10 zezakhamizi zayo zisebenza ngaphandle kwensimu yaseRussian Federation.
Kodwa-ke, ukufuduka kwemisebenzi emhlabeni wonke kuhilela ukudluliselwa kwabasebenzi abanekhono, okubandakanya ososayensi, abacwaningi, abaculi, abahleli, njll. Kulokhu kuhlanganiswa, inqubo "yokucubungula ubuchopho" ibonwe iminyaka eyishumi, lapho ochwepheshe abakhulu bephuma eRussia kuze kube phakade, behamba behlala khona USA, Canada naseNtshonalanga Yurophu. Ngokuba isimo akusilo, kodwa wonke umuntu unelungelo eligcwele lokunquma ngokuzimela lapho ahlala khona futhi asebenze khona. Ngenxa yalesi sizathu, umsebenzi wamazwe ngamazwe uhlala njalo.
Iningi labo, imakethe isabela ngokushesha ngokuntuleka kwabasebenzi emkhakheni owodwa noma omunye, ogcwaliswa ngokushesha uma kungenjalo yiRussia, bese kuthiwa yizifiki. Ngamunye wethu wabona ezindaweni zokwakha zasekhaya zaseTajiks nase-Ubeks, eRussia akha izindlu zabathuthukisi ngabanye. Kwezinye izici, ukufuduka okunjalo kungaba nomthelela omubi ngesimo nabakhileyo, lapho ngezinye izikhathi abangakwazi ukuthola umsebenzi. Kodwa-ke, ngakolunye uhlangothi, iningi labasebenzi bangaphandle lenza umsebenzi ongadingi iziqu eziphezulu.
Izizathu zokufuduka komsebenzi emhlabeni wonke zifaka lokhu okulandelayo:
- izinga eliphansi lokuthuthukiswa komnotho wezwe ;
- Ukuvikeleka kwezenhlalakahle eziphansi kwezakhamizi;
- Izinga eliphansi lemholo;
- ukungabi nokusimama nokungazinzi kombuso wezepolitiki.
Kumele kuqashelwe ukuthi ukufuduka komsebenzi kudlala indima ebalulekile ekusatshalaliswa kwemithombo yomsebenzi emhlabeni jikelele. Ngenxa yalokhu, izingxenye ezihluphekayo zabantu zingakwazi ukuhlala kangcono, kanti umphakathi ocebile usebenzise ngokuzithandela izinsizakalo ezinikezwe abafuduki.
Indlela yokubala isilinganiso sokuzimela?
Thermal ukubala walling: isibonelo sokubala kanye nomklamo. Formula ukushisa ubunjiniyela ekubalweni imiklamo ekuvikeleni
Humidifiers ngoba indlu: izinhlobo